Maamulgoboleed xubinta ka ah Federaalka Soomaaliya ee waqooyi bari
Maamul Goboleedka Puntland ama Buntland Af-Carabi:( أرض البنط) waxay si rasmi ah u tahay Dowlad goboleedka Puntland, waa maamul goboleed ku yaalo woqooyi bari ee dalka Somaaliya. Maamulkaan caasimadiisa waa Garoowe ee gobolka Nugaal. Puntland waxee xuduud la leedahay Somaliland oo ka xigta Galbeedka iyo Gacanka Cadmeed oo ka xiga Woqooyiga, dhinaca Bariga neh waxaa ka xiga Marinka Gardafuul iyo Badda Soomaal. Dhinaca Koonfurta neh waxaa ka xigo Gobolada dhexe ee soomalia, gaar ahaan galmudug, Koonfur Galbeed neh waxaa ka xiga wadanka Itoobiya. Puntland waxaa degan 1 kiiba 3 shacabka somalia oo dhan, waxaa degan dad ka badan 4 miliyan oo qof. Magaca Puntland waxuu kayimi dhulkii uduga oo ay aqoonjireen ganacsato carbeed gaar ahaana masaarida oo gobolada waqooyi bari kadhoofsan jiray uduga sida kumanaan sano kahor, Itoobiya puntland ayuu dalkiisa ku xukumaa, itoobiyana puntland ayey heestaa.
Dawladda Puntland ee Soomaaliya
Maamul Goboleedka Puntland
اقليم أرض البنط
Calanka Puntland Astaanta Puntland
Halkudheg: "iskaa" (wax )
"u " (qabso)
Dawlad goboleedka Puntland
Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntlnd
Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali
Madaxwene ku xigeen Cabdixakin Cabdullahi Camey (Xisbi kama tirsana)
Agosto 26, 2013 (12th)
Wadarta 100 km2 (39 sq mi)
Biyo (%) 50 km2 (19 sq mi) (50%)
Heerka Soomaaliya 0.2% ee 637,65 km2
Wadarta (2013) 2,000,000 (2013)
Tira sanadeed (2013) 40,000/km2 (100,000/sq mi)
Wadarta (2011) C$3.624 billion
Qof qof C$1,556 (3aad)
Furo Posto SO (gaarka PL)
jiro/ Ma jiro
Waardiyaha puntland ee la yidhaahdo ciidanka daraawiishta Puntland, waxaa loogu magac daray qaranka beelaha Ciid-Nugaal, ama Si'iid Harti ama reer darawiish uu Diiriye Guure hogaaminayay oo caasimada ahayd Taleex waqtiga gumeysiga.
1 Dawladda Puntland
2 Madaxweyne ku xigeenka
3.1 Qarniga 20ka
3.2 caasimada puntland
3.3 Qarnigii 21ka
6 Kaabayaasha (infrastructure)
6.2 Caafimaadka Puntland
6.3 Kor u qaadista
Dawladda Puntland ee somaliyeed waxaa la asaasay 1998kii, waxaana asaasay isimo ,siyaasiyiin,ganacsato,culimaa,udiin ,haween dadka ugu caansanaa ee isugu yimi shirkii GAROWE kadhacay 1998 waxaa kamid ahaa madaxweynihii hore ee Dawladda DFKMG Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Ibrahim Abshir Ibrahim, Beeldaaje Xaaji Cabdullahi, Suldaan Ciise Xasan Cumar, Ugaas Yaasiin, Suldaan Saciid Cabdisalaan, Islaan Maxamed iyo Garaad Jaamac ,sababta loo sameeyay maamulkaan wuxuu ahaa si loo badbaadiyo shacabka woqooyiga. Maamulka puntland aad ayuu uuga duwanyahay maamulka kale ee somaliland. Puntland ma raadinooso kala goynta dalka somalia, dadkaan waa dad wadaniyiin ah . shacabka puntland run ahaantii waa dad markasto raadiyo isku keenta shacabka soomaaliyeed. Puntland waxee leedahay maamul xukumo iyo barlamaan u gooni ah iyo wasiiro maamulo shacab woqooyiga.
Madaxweynihii ugu horeeyay ee puntland woxoo ahaa Cabdullahi Yuusuf, waxaa ku xigay Maxamed Abdi Xaashi waxaa ku xigay Cade Muuse waxaa ku sii xigay Cabdiraxmaan Maxamuud faroole, Hadana waxaa xilka hayya Cabdiwali Maxamed Cali.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland, badankood waa reer Darawiish, sida Axmed Karaash, Abdihakim Amey, Hasan Afqurac, Mohamed Xaashi oo dhamaan reer Darawish ah.
Garowe waxaa kunool dad kor udhaafaya 257,300 waxaa lagu tilmaamaa magaalooyinka ugu kobaca badan soomaaliya. waa magaalo loo tago dalxiiso waxay leedahay meelo taarikhi ah oo aan lasookoobikarin
Garoowe waa caasimadda Dawladda puntland ee somaliyeed, Garoowe ayaa waxay soo martay maraxalado kala gedisan. Haatanna waxay maraysaa heer keedii ugu sarreeyay. Magaalada Ayaa xarun u ah haayado dowliya iyo kuwa aan dowli ahayn,qunsuliyado,ururo maxali ah , kuwa NGO ah,radio stations,TV IWM. Garowe waxaa ku yaal Meelo aad iyo aad u qurxoon suuqaaq iyo bacadlayaal aad iyo aad u camiran Jawiga ayaa had iyo goorba ah mid aan qaboow saa'ida iyo kulayl saa'idana aan lahayn qorraxda ayaa inta badan waxaa ku dahaaran cadar iyo daruuro.
Ka dib markii wadatashiyo badan ay yeesheen isimada, siyaasiyiinta, aqoonyahanka, ganacsatada, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool goboladan, ayaa waxaa la go'aansaday in magaalada Garoowe lagu qabto shir loo wada dhan yahay kaasoo ujeedadiisu ay ahayd in la dhiso maamul dowlad goboleed. Islamarkaas waxaas ku soo biiray Gobolada Sanaag iyo Sool oo kula bahoobay Maamulaka cusub Goboladii laysku oran jiray Waqooyi Bari.
Shirkaas waxaa ka soo baxay bartamihii 1998, Dowlad Goboleedka Puntland, taasoo leh sadexda awoodood oo kala ah, Golaha Wakiilada oo dhan 66 Xilibaan oo lab iyo dhedigba leh, Garsoorka , iyo Golaha Xukuumada oo leh Madaxwayne iyo madaxwayne ku-xigeen.
Sida uu qeexayo Xeerka 1aad,. ee axdiga ku meel-gaarka ah ee lagu dhisay Puntland.
Hubinta iyo controlka daawada
Waxaa wasaarada u suurto gashey in la helo labo mashiin oo ah kuwa lagu baarey tayada daawada oo la dhigay Magaalada Bosaso (Dekada) iyo Garowe.
Waxaa ay wasaaradu magacowday gudi dib u eega nidaamyada ilaalinta kontoroolka daawada.
Waxa socda dib u eegista iyo hirgelinta sharciga caafimaadka ,Waxa hirgeshey in la mamnuuco ka ganacsashada daawada qaaxada ee goobaha ganacsiga ah.
hirgalinta Siyaasadda (ISKA WAX U QABSO)
Waxa wasaaraddu si fiican ugu wacyi gelisey bulshada reer Puntland ka qeyb qaadashada caafimaadka guud Waxa ay wasaaraddu ka shaqeysay isku xirka Jaaliyada dibada ee reer Puntland si ay gacan fiican uga geystaan caafimaa
Qabiilada ku nool Puntland waxaa ka mid ah Leelkase, Awrtable, Deshiishe, Majeerteen iyo reer darawiish.
Calanka Puntland waxay uu eegtahay calanka Uzbekistan iyo calanka Lesotho.
Miisaaniyadaha Degmooyinka. Markii u horaysay Wasaaradda Arrimaha Guduhu waxay ku guuleysatay inay Miisaaniyado u samayso qaar ka mid ah Degmooyinka Puntland walow aan Degmooyinka oo dhan loo samayn hadana waxaa loo sameeyey 9 Degmo o ka tirsan Degmooyinka Miisaaniyadaas oo isu dheeli tiraysa Dakhli & Khara.
Waxayna ka kooban tahay Saadaasha/ Odorosida Dakhliga soo gelaya Degmooyinka ee la filayo & Kharashka ku baxaya hawlaha Degmadda taas oo sahashay in D/hoose lagula xisaabtamo Dakhliga soo galay & sida ay u kharash gareeyeen , Miisaaniyadda Degmooyinku waxay ka mid noqonayaan Dakhliga Guud ee Dowladda dhexe (GDP).
Liiska Degmooyinka loo sameeyey Miisaaniyadaha & Qiyaasta Kharash & Dakhli ee Degmooyinkaas
Degmadda Wadarta Guud ee Miisaaniyadda Sh.so/
Waxaa si joogta u shaqeynaya oo adeegyada caafimaadka joogta bixiyey 86 xarumaha hooyada iyo dhalaan, 8 Isbitaal heer gobol, 9 Isbitaal 7 xarumaha qaaxada, 5 xarumaha barista iyo la talinta cudurka Ej-Ay-Fii Aydhiska, 10 xarun oo caafimaad dhimirka, 6 xarun quudinta nafaqda iyo 212 Baro caafimaad.
Xarumahaas caafimaadka waxa ay dhamaantood ku kala yaalan dhamaan degaanada Puntland heer gobol ilaa tuulo.
Guud ahaan xaalada caafimaad ee dalka waa mid degan waxaana si dhameystiran loo xakameeyey cuduraddii dilaacey 3 bilood ee la soo dhaafey Dalgaalkii galmudug ka dacay waa la gu laayey puntland markaasna puntland way jabtey.
Kor u qaadista wadashaqeynta hayadaha
Dhulka Sool, Sanaag iyo Cayn waa dhul muransan
Waxa la sameeyey nidaam wadashaqeyn hayadaha ka shaqeeya caafimaadka Puntland si wax ku ool u noqdaan mashaaricda ay nagalaa shaqeeyan Hayadaha caalamiga ah.
↑ Dr. Badal W. Kariye, PAGE 23
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Puntland&oldid=234254"
Last edited on 15 Abriil 2022, at 02:30
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Abriil 2022, marka ee eheed 02:30.